Aplus Global Ecommerce Yakavanzika Sera Verenga Izvi
Mutemo wega wega wakanyatsogadzirwa kune avo vanoda kuziva kuti "Mashoko Evanhu" ari kushandiswa sei paIndaneti. Ruzivo rwega runoshandiswa kuratidza, kubata, kutsvaga, kana kuona munhu ane hanya mune ino mamiriro.
Ndokumbirawo kuti muverenge yedu yekuvanzika maitiro kuti tinzwisise kuti tinounganidza sei data, kurishandisa, kudzivirira, kana kubata zvinoenderana neyedu webhusaiti.
Ruzivo rwePamoyo rwakatorwa nesu panguva yeblog kana kushanya kwewebhusaiti
Pakunyoresa uye kubvunza fomu zadza, isu tinotora rinotevera ruzivo: Zita reMushanyi, Email Kero, Nharembozha (Inesarudzo), uye zvimwewo zvinoenderana nebasa rakabvumiranwa.
Isu tinounganidza sei ruzivo?
Isu tinotora ruzivo rwemushanyi panguva yekuBvunzurudza fomu kuzadza, Kurarama Chat, kana pakunyoresa pane yedu saiti.
Tinoshandisa sei ruzivo rwakaunganidzwa?
Tinogona kushandisa ruzivo rwakatorwa nenzira dzinotevera:
Kuita yako ruzivo uye kupa mhando yezvinyorwa uye chigadzirwa chaungade kana chaungade mune ramangwana.
Ipa basa riri nani mukupindura mubvunzo wako kana chikumbiro.
Nezve ratings uye ongororo yemasevhisi kana zvigadzirwa zvatinopa.
Kutevera pamberi pekunyorerana (rarama chat, email, kana foni kubvunza)
Isu hatishandisi kunetseka kuongorora uye / kana kuongorora kune zviyero zvePCI.
Isu tinongopa zvinyorwa uye neruzivo uye hatimbobvunze yako kiredhiti kadhi nhamba.
Ruzivo rwePamoyo rwakagovaniswa newe ruri kumashure kwenetiweki dzakachengetedzwa uye dzinogona kuwanikwa chete nevanhu vane mukana wakakosha wekuwana data. Isu tinodikanwa kuti tichengete rese rako rakaunganidzwa data rakavanzika. Zvakare, ruzivo rwakashata rwunopihwa newe rwakanyorwa uchishandisa SSL (Yakachengeteka Socket Layer).
Isu tinotora matanho ese pese paunopinda, kuendesa, kuwana chero ruzivo kuti uve nechokwadi chekuchengetedza zvakanyanya.
Zvose zvinotengeswa zvinoshandiswa kuburikidza nevanopinda musuo uye hazvichengetwi kana kushandiswa pamashanda edu.
Yese kubhadharisa kunoitwa uchishandisa mubhadharo wegedhi uye isu hatitombokwanisa kana kufunga kuchengetedza iyo data pane edu maseva.
Isu tinoshandisa 'makuki'?
Tinokumbira mvumo yako usati waunganidza makuki. Unogona kusarudza kubvuma kana kudzima makuki ese.
Isu tinokumbira makuki kuti tipe ruzivo rwakasarudzika. Nekudzima makuki zvimwe zvezvinhu zvewebhusaiti zvinogona kusashanda asi iwe uchiri kugona kuisa maodha.
Mutatu wechitatu kuzivisa
Isu hapana nzira yatinotengesa, kutengesa, kana kuendesa chero munhu kune chero wechitatu bato kunze kwekunge zvichidikanwa nebasa rakabvumiranwa.
Isu hatipe chero mhando yechitatu-bato zvinopihwa kana masevhisi.
Zvinodiwa neGoogle zvekushambadzira zvinogona kupfupikiswa neGoogle's Advertising Principles. Ivo vanoiswa munzvimbo kuti vape yakanaka chiitiko kune vashandisi. Tarisa Pano.
Kudzokorora neGoogle AdSense
Google Display Network Kugadzirisa Kuzivisa
Kuwanda kwevanhu uye Kufarira Kuzivisa
Isu pamwe nevatengesi vechitatu-bato, senge Google tinoshandisa makuki ekutanga-bato (senge maGoogle Analytics makuki) uye makuki echitatu-bato (senge DoubleClick kuki) kana mamwe maidhi-echitatu-bato pamwechete kuti tibatanidze data maererano nekubatana kwevashandisi kuratidzwa kwekushambadzira uye mamwe mabasa ekushambadzira sezvaanoenderana newebhusaiti yedu.
Isu nevatengesi vedu vechitatu-chechitatu tinongoshandisa kekutanga-bato makuki (e analytics) uye echitatu-bato makuki (DoubleClick Cookie) kana zvimwe zvitupa zvechitatu-bato kuunganidza data rezviratidzo zvekushambadzira uye mamwe mabasa anoenderana needu webhusaiti.
Yedu Yakavanzika Policy inongedzo inosanganisira izwi rekuti 'Kuvanzika' uye inogona kuwanikwa zviri nyore pane peji riri pamusoro.
Vashandisi vanozowana ziviso maererano neshanduko yemutemo yekuvanzika.
Pamusoro peChinyorwa Chedu Chedu Peji
Vashandisi vanokwanisa kushandura ruzivo rwavo rwega:
Isu tinotora yako email kero ku:
Kutumira ruzivo, kupindura kumibvunzo, uye / kana zvimwe zvikumbiro kana mibvunzo.
Kugadziriswa kwemirairo, kutumira ruzivo, uye kugadzirisa pamwe neakabatana odha.
Isu tinoishandisawo kukutumira iwe rumwe ruzivo rwakanangana nebasa rakabvumiranwa.
Shambadza edu ekupedzisira masevhisi uye zvinopihwa kune edu vatengi mushure mekutangisa kwekutanga zvaitika.
Kana paine chero nguva iwe yaunoda kuzvinyoresa kubva kune yedu yemberi email titumirewo email pa info@aplusglobalecommerce.com uye isu tinobvisa iwe kubva kune ese ramangwana tsamba.
Kana paine chero mibvunzo maererano neyakavanzika mutemo iwe unogona kutibata nesu uchishandisa irwo ruzivo pazasi.